Kuchengetedza mushandisi wemidzi muUbuntu 20.04 Focal Fossa | Linux Vakapindwa muropa
Kuchengetedza mushandisi wemidzi muUbuntu 20.04 Focal Fossa
Ndanga ndichitaura nezvazvo Mautic. Chinangwa changu chaive chekutanga kutsanangura kubva kuchinyorwa chino maitiro ekuiisa pane chaiyo yakavanzika server. Asi, nenjodzi yakachena ndakawana chimwe chinhu. Yangu webhu inomiririra inopa maviri marudzi emifananidzo yeiyo server vhezheni yeUbuntu 20.04; iyo yekutanga uye imwe yakasarudzika navo. Kugadzirisa kwavo kunochengetedza nguva yekumisikidza asi zvisina basa kuomesa kuiswa kweMautic.
Kuti ndidimbure, ndakaparadza zuva rekutsvaga iro raigona kunge rakandiponesa ndichishandisa mufananidzo wekutanga, asi, sevamwe Izvo zvinhu zvandakawana zvinogona kubatsira kune mumwe munhu, ndakazvigadzirisazve mune ino chinyorwa.
1 Kuchengetedza mushandisi wemidzi
1.1 Mushandisi manejimendi
1.2 Kugadzira mushandisi mutsva nemasimba emaneja
1.3 Kuchengetedza mushandisi wemidzi
1.4 Kuchengetedza kuwana kure
Kuchengetedza mushandisi wemidzi
Mumwe wekusiyana pakati peiyo yekutanga Ubuntu mufananidzo uye neyeyeye wangu wekutambira mupi ndewekuti mune yekutanga ini ndakasarudza zita rangu rekushandisa nephasiwedi, nepo mune yechipiri Mudzi mushandisi akagadzirwa uye password yaigadzirwa otomatiki.
Kumwe kugoverwa kweLinux kunokubvunza iwe panguva yekumisikidza mapassword maviri, password yemushandisi uye password password Mudzi mushandisi anogona kuita zvachose chero chaanoda nehurongwa. Nezvikonzero zvekuchengetedza zvirinani kudzikisira mashandisiro uye kugadzira mumwe mushandisi ane masimba emaneja, asi ndiani anogona kubviswa kana paita dambudzikos. Ndokusaka Ubuntu ichisarudza kusagadzira iyi mhando yemushandisi nekumira kunyange zvichikwanisika kuiwedzera gare gare.
Paunopinda muUbuntu, Kana iwe uchida kuita shanduko dzakakosha, iwe unofanirwa kutaurira iyo inoshanda system kuti iwe une mvumo dzakakodzera. Izvi zvinoitwa nekuisa password muhwindo rinovhura kana nekutaipa chirevo chakatungamirwa nemirairo yeSudo mune terminal.
Mushandisi wemidzi ane rairo yake, su chii pIyo inobvumidza kuita chero kuraira kwete chete panzvimbo yako asi pachinzvimbo chemumwe mushandisi. Paunenge iwe waisa pasiwedhi iwe unogona kuita chero chaunoda nesystem kudzamara wonyora mbudo Mune terminal.
Pane kudaro, sudo Inogona chete kuurayirwa pachinzvimbo cheumwe mushandisi, mumwe kuraira panguva uye iwe unofanirwa kuseta iyo password nguva yega gumi nemashanu maminetsi.
Zvinofanira kujekeswa kuti Ubuntu ine Mudzi mushandisi, asi, sezvo isina password yakagadzirirwa, zvinoita sekunge isipo. Kuti ukwanise kuigonesa, iwe unofanirwa kunyora unotevera kuraira:
Kugadzira mushandisi mutsva nemasimba emaneja
Kana iwe uine sevha kana komputa iyo vanhu vazhinji vanowana uye, nekuda kwechimwe chikonzero, iwe une Mudzi mushandisi inogoneswa, lkana zvirinani kutora matanho ekudzivirira
Kugadzira mushandisi mutsva tinonyora rairo
sudo useradd nombre_de_usuario
Rangarira kutsiva zita rekushandisa nezita raunosarudza.
Ipapo isu tinopa password
sudo passwd nombre_de_usuario
Sisitimu yacho inokukumbira kuti uise pasiwedhi kaviri. Rangarira kuti urikushandisa iyo terminal uye hauzoone zvauri kunyora.
Chirongwa ichi chinopa kuti chibvume zvakasarudzika tsika kana kuzadza imwe ruzivo. Ini ndinokurudzira kuti ubvume zvigadziriso zvekumisikidza.
Iye zvino tinoenderera mberi nekupa iwo mushandisi nyowani maneja masimba
Kana wako wekutambira mupi akagadzira yako mushandisi yemushandisi iwe, ingangove zvakare yakagadzira password inosangana nemamwe ekuchengetedza kurudziro Inokurudzirwa kuti uchinje icho nemurairo
kodhi> Sudo passwd mudzi
Chengetedza mazano anotevera mupfungwa:
Usashandise mazwi anowanikwa muduramazwi.
Sanganisa zviratidzo uye alphanumeric mavara.
Nyora pasiwedhi sekureba sezvaunogona uye shandisa maneja kuzvichengeta.
Unogona kukiya mushandisi wemidzi nemirairo inotevera
Uye vhura iyo nekupa nyowani nyowani neiyi:
Kuchengetedza kuwana kure
Rangarira kuti chinyorwa ichi chakagadzirirwa kutaura nezve chaiwo maseva akasarudzika. Zvinogoneka kuti mupi wako anotendera iwe kuti uwane iyo chaiyo sevha uchishandisa iyo browser, asi kazhinji ungazosvika kure uchishandisa SSH protocol. Imwe yekuwedzera dura rekuchengetedza ndeyekudzima kushandiswa kweMushandisi mushandisi ari kure.
Tinoita izvi ne:
Tinotsvaga mutsara uyu
Uye patinoiwana tinoshandura Hungu kuva Nha.
Tichiri pazviri, tsvaga mutsara unotevera:
Uye ita shuwa kuti yakagadzirirwa NO
Sevha shanduko neCTRL + X
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kuchengetedza mushandisi wemidzi muUbuntu 20.04 Focal Fossa
Maitiro ekugadzira yakachengeteka recharge muClaro kiredhiti
Chrome OS 88 inosvika nechengetedzo yekuchengetedza screen pamwe nedzimwe shanduko